မြင်တာနဲ့စားချင်စဖွယ် ဖြစ်နေစေမယ့် ထမင်းဘူးလှလှလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ - For her Myanmar
ဒီလိုဆို ထမင်းဘူးဆီပဲ အာရုံရောက်နေဖို့ ကျိန်းသေနေပါပြီ
ယောင်းတို့ရေ.. ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲလိုတော့တယ်နော်.. အ်ိမ်မှာဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့သားသားမီးမီးလေးတွေကို စိတ်ကြိုက်ဂရုစိုက်ပေးလို့ ရနိုင်ပေမဲ့ ကျောင်းတက်ချိန်တွေမှာတော့ ထမင်းမှစားရဲ့လား ။ ပျော်ရောပျော်ရဲ့လားနဲ့ စိတ်ပူရတာ အမောပဲဟုတ် ။ ကျောင်းပျော်မပျော်ဆိုတာက နောက်၊ ထမင်းပုံမှန်မစားဘဲနေရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပြီး ကျောင်းပါမသွားနိုင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ သားသားမီးမီးလေးတွေ ထမင်းစားဖို့အရေး ခေါင်းကိုက်ရတာကလည်း မေမေယောင်းတို့ တော်တော်များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုဆို ထမင်းဘူးထည့်ပေးတဲ့အခါ ပုံမှန်ထည့်ပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လှလှပပလေး ပြင်ဆင်ပြီး ထည့်ပေးမယ်ဆို သူတို့လေးတွေရဲ့ စားချင်စိတ်ကို ပိုပြီး လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရော… ယောင်းတို့ သတိထားမိကြရဲ့လား?
ယောင်းတို့သားသားမီးမီးတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် ထမင်းဘူးပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အရောင်လေးတွေနဲ့ သူတို့သဘောကျတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ ဖန်တီးပေးပြီး မျက်စိပသာဒရှိအောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ လိုပါမယ် ယောင်းရေ…
Related Article >>> ဇနီးသည်မီးဖွားတဲ့အခါ ခင်ပွန်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုခွင့်ခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်လဲ?
အရောင်လေးတွေ များများသုံးနိုင်ရင် ထမင်းဘူးလေးလည်း ပိုလှသလို ယောင်းတို့ကျွေးချင်တဲ့ အသီးအရွက်တွေကိုလည်း စုံစုံလင်လင် ထည့်ကျွေးနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ သားသားမီးမီးတွေ ထမင်းပိုစားလာနိုင်သလို လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေလည်း တစ်ခါတည်း အစုံပါသွားတော့တာပေါ့…
အရုပ်လေးတွေ ပုံဖော်ဖို့ဆိုတာလည်း ထွေထွေထူးထူး စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူးနော်.. ထမင်းကို ဆုပ်၊ လုံးပြီး ရေညှိလေးတွေ၊ အသားပြားလေးတွေနဲ့ စိတ်ကူးရှိသလို ဖန်တီးပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
ငရုတ်ဆီဆမ်းတာကအစ ဘေးမှာပုံထားပေးမယ့်အစား လှလှလေးပုံဖော်ပြီး တင်ပေးတာက ကလေးတွေအတွက် ပိုပြီးအမြင်ဆန်းစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြက်အူချောင်းတွေဆိုလည်း ဒီတိုင်းကြော်မယ့်အစား ပန်းပွင့်လေးတွေပုံဖော်ပြီး ကြော်လိုက်တော့ ပိုလှသွားတာပေါ့..
ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် ထမင်းဘူးလှလှဖြစ်အောင် ပုံဖော်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင် မင်မင်ပြထားပေးတဲ့ ထမင်းဘူးထဲက ပုံလေးတွေကို နမူနာယူပြီး ပြင်ဆင်ပေးလို့ ရပါတယ်လို့…
ကဲ ယောင်းတို့သားသားမီးမီးလေးတွေတော့ မသိဘူး။ မင်မင်တောင် ထမင်းဘူးလှလှလေးတွေ သဘောကျလွန်းလို့ ရုံးကိုကိုယ့်ဘာသာ ပြင်ဆင်သွားတော့မယ်ကွယ်..
ဒီလိုဆို ထမငျးဘူးဆီပဲ အာရုံရောကျနဖေို့ ကြိနျးသနေပေါပွီ
ယောငျးတို့ရေ.. ကြောငျးတှပွေနျဖှငျ့ဖို့ ရကျပိုငျးလောကျပဲလိုတော့တယျနျော.. အိမျမှာဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့သားသားမီးမီးလေးတှကေို စိတျကွိုကျဂရုစိုကျပေးလို့ ရနိုငျပမေဲ့ ကြောငျးတကျခြိနျတှမှောတော့ ထမငျးမှစားရဲ့လား ။ ပြျောရောပြျောရဲ့လားနဲ့ စိတျပူရတာ အမောပဲဟုတျ ။ ကြောငျးပြျောမပြျောဆိုတာက နောကျ၊ ထမငျးပုံမှနျမစားဘဲနရေငျ ကနျြးမာရေးထိခိုကျပွီး ကြောငျးပါမသှားနိုငျဖွဈမှာဆိုတော့ သားသားမီးမီးလေးတှေ ထမငျးစားဖို့အရေး ခေါငျးကိုကျရတာကလညျး မမေယေောငျးတို့ တျောတျောမြားမြား ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒီလိုဆို ထမငျးဘူးထညျ့ပေးတဲ့အခါ ပုံမှနျထညျ့ပေးတာမြိုး မဟုတျဘဲ လှလှပပလေး ပွငျဆငျပွီး ထညျ့ပေးမယျဆို သူတို့လေးတှရေဲ့ စားခငျြစိတျကို ပိုပွီး လှုံ့ဆျောပေးနိုငျတယျဆိုတာရော… ယောငျးတို့ သတိထားမိကွရဲ့လား?
ယောငျးတို့သားသားမီးမီးတှေ အကွိုကျတှမေ့ယျ့ ထမငျးဘူးပွငျဆငျဖို့အတှကျ အရငျဆုံး အရောငျလေးတှနေဲ့ သူတို့သဘောကတြဲ့ ကာတှနျးလေးတှေ ဖနျတီးပေးပွီး မကျြစိပသာဒရှိအောငျ ဆှဲဆောငျဖို့ လိုပါမယျ ယောငျးရေ…
Related Article >>> ဇနီးသညျမီးဖှားတဲ့အခါ ခငျပှနျးအနနေဲ့ ဘယျလိုခှငျ့ခံစားခှငျ့တှေ ရရှိနိုငျလဲ?
အရောငျလေးတှေ မြားမြားသုံးနိုငျရငျ ထမငျးဘူးလေးလညျး ပိုလှသလို ယောငျးတို့ကြှေးခငျြတဲ့ အသီးအရှကျတှကေိုလညျး စုံစုံလငျလငျ ထညျ့ကြှေးနိုငျမှာပါ။ ဒီတော့ သားသားမီးမီးတှေ ထမငျးပိုစားလာနိုငျသလို လိုအပျတဲ့အာဟာရတှလေညျး တဈခါတညျး အစုံပါသှားတော့တာပေါ့…
အရုပျလေးတှေ ပုံဖျောဖို့ဆိုတာလညျး ထှထှေထေူးထူး စဉျးစားစရာ မလိုပါဘူးနျော.. ထမငျးကို ဆုပျ၊ လုံးပွီး ရညှေိလေးတှေ၊ အသားပွားလေးတှနေဲ့ စိတျကူးရှိသလို ဖနျတီးပွငျဆငျလို့ ရပါတယျ။
ငရုတျဆီဆမျးတာကအစ ဘေးမှာပုံထားပေးမယျ့အစား လှလှလေးပုံဖျောပွီး တငျပေးတာက ကလေးတှအေတှကျ ပိုပွီးအမွငျဆနျးစနေိုငျပါတယျ။ နောကျပွီး ကွကျအူခြောငျးတှဆေိုလညျး ဒီတိုငျးကွျောမယျ့အစား ပနျးပှငျ့လေးတှပေုံဖျောပွီး ကွျောလိုကျတော့ ပိုလှသှားတာပေါ့..
ကိုယျ့စိတျကူးနဲ့ကိုယျ ထမငျးဘူးလှလှဖွဈအောငျ ပုံဖျောဖို့ အခကျအခဲရှိတယျဆိုရငျ မငျမငျပွထားပေးတဲ့ ထမငျးဘူးထဲက ပုံလေးတှကေို နမူနာယူပွီး ပွငျဆငျပေးလို့ ရပါတယျလို့…
ကဲ ယောငျးတို့သားသားမီးမီးလေးတှတေော့ မသိဘူး။ မငျမငျတောငျ ထမငျးဘူးလှလှလေးတှေ သဘောကလြှနျးလို့ ရုံးကိုကိုယျ့ဘာသာ ပွငျဆငျသှားတော့မယျကှယျ..
Tags: beautiful, children, Create, Eat, Food, Knowledge, Lunch Box, mom, school